Mpanamboatra masinina Alminum CNC - Mpanamboatra masinina Alminum CNC
Machining Machining CNC
Machining Alminum CNC
Machining CNC plastika
Machining Steel Steel
Fampahalalana momba ny indostria
Famotsorana ny tetikasa
Sombin-javatra mihodina CNC Aluminium
Ireo singa miodina amin'ny ALuminum CNC
Fitaovana milina EDM
Milina fanodinana vy Carbon
Famolavolana CNC Stainless Steel
Fanariana maty ho an'ny firaka aluminium
Ny faritra EDM Machining Ny fizotry ny EDM dia tsotra be, ary ny taratra elektrika dia noforonina teo anelanelan'ny elatra elektrôtra niaraka tamin'ny fitaovana fitondra mandeha amin'ny herinaratra, matetika mihatra amin'ny sasany amin'ireo hevi-dehibe sarotra, bobongolo plastika, faritra ambany ary faritra kely, sns. ny fahaizan'ny sangan'asa dia hatramin'ny 16 santimetatra ny hateviny, ary ny zoro an-tampon'ny 30 degre dia azonay atao ny miasa hatramin'ny 25,6 "x 16" x 17,75 ″. Ny fanapahana tariby tsara dia afaka mamokatra tena endriny sy zorony hatramin'ny .001 ”wi ...
Ny faritra mihodina amin'ny CNC: Ny lathes-n'ny CNC dia mamela ny hafainganam-pandeha avo lenta sy avo lenta ho an'ny plastika sy ny metaly. Ny fizotran'ny fihodinana dia ahafahana mamorona géometrijika ivelany sarotra sy atody anatiny. Ny fahafahantsika mihodina dia misy amin'ny iray-off hatramin'ny famokarana batch ny singa. Milina fitotoana mihodina koa miaraka amin'ny tilikambo fitaovana misy fahombiazana avo kokoa. Ny tombony amin'ny milina fanodinodinam-bidy (1) hanafohezana ny rojom-pamokarana vokatra ary hanatsara ny fahombiazan'ny vokatra. Tur ...
Nahoana no mifidy anay: 1.We dia orinasa manana traikefa cnc mihoatra ny 20 taona. 2.Approx 95% ny vokatray dia aondrana mivantana any Etazonia / Canada / Australia / UK / France / Germany / Bulgaria / Poland / Italia / Netherlands… Ny kalitao azo antoka. 3.Ny ankamaroan'ny masininay dia novidina avy any Etazonia sy Japon toy ny marika HAAS (3-axis, 4-asxis cnc milling machine), Brother, TSUGAMI (milina familiana 6-axis), Miyano sns. noho izany izahay dia afaka manao faritra avo lenta mifanaraka amin'ny fitakiana fandeferanao. 4 ....
ny mailaka fanaontsika isan-kerinandro
Room 816, No. 12, Changping Avenue, Changping Town, Dongguan City, Provinsi Guangdong, Sina 523570
Karazana ivon-toeran'ny milina axis dimy
Ahoana no tokony hisafidianantsika tsara ny qual ambony ...
Inona no ho avin'ny spésipikaly machining NC ...
Fanaraha-maso ny mari-pahaizana momba ny milina an'ny CNC lath ...
Ahoana ny fanatsarana ny fahombiazan'ny famokarana ...
Ahoana ny fitantanana tsara ny indostrian'ny fanodinana CNC